ukwelashwa surface usebenzisa imishini uyonikezwa amaphepha athile namatshana ahlukahlukene, esemgwaqweni kwi yedwa elingunxande, odala high-imvamisa reciprocating ezinyakazayo. Sander vibration kuyahluka indlela ngokucophelela handling kanye nokusebenza okusezingeni ngesikhathi esifanayo, ne kungenzeka ukususwa ungqimba ebhuqwini nokugqwala kusuka kude, ukusetshenziswa imisebenzi nge izihloko kokuba surface ngothayela noma okungajwayelekile.
I-apharathasi ongaqhuba ezimeni eziningana, ngamunye ephethe izinga elithile vibration. Isetshenziselwa post-ukucutshungulwa plastic, metal, netshe, nokhuni izikhala. Ukugaya kungaba esihle noma indawo, kuncike namatshana esetshenziswa amashidi. Ukugaya umshini vibration Futhi efanelekayo kokususwa upende ungqimba, nokugqwala kanye imihuzuko.
The main ilungu ezisebenza paper amashidi nge ebusweni olwalwenza, zikhona ukuhluka eziningana futhi ube usayizi ezahlukene okusanhlamvu. Okuvame kakhulu kukhona izakhi olwalwenza kwesilinganiso usayizi okusanhlamvu ezincane asetshenziselwa yokuqedela esihle futhi ezipholisha. Ngakolunye uhlangothi fastener ishidi iyadingeka ukuze okunamathiselwe esiphephile ithuluzi futhi esikhundleni ngokushesha kuphela ukuze amayunithi olwalwenza ngolunye uhlobo lothando.
Kumadivayisi amaningi, ungasebenzisa njalo lokukhuhla, uvala izibopho ekhethekile. Into esemqoka ukwenza zangaphambi ukuvuleka yakhe yokususa uthuli.
Ukucubungula evele eziyinkimbinkimbi
Ezinye grinders vibratory Bavumela ukusebenza imikhiqizo ebusweni okuyinto kwaba nzima ukufinyelela. Lokhu ibangelwa kuhlomisa a ematheni yesimanje kwakheka umumo esingunxantathu. Kuba esisemqoka lapho esebenza zamafasitela futhi kwakudala. Futhi, kulula ukusebenzisa indiza encane. It kalula iphatha anemifantu engajulile, anemifantu futhi emaphethelweni. Kufanele kuqashelwe ukuthi esikhundleni ematheni lingasethwa ekhethekile isici ukugaya evumela ukuthi iphathe izimbotshana ezincane kunazo nemifantu. It has a standard ukukhiya indlela, ngakho lapho esikhundleni sakhe asikho isidingo sokuba amathuluzi akhethekile.
On isixwayisi Sander Izibuyekezo kufanele zihlolwe ukuze wenze kube lula ukucacisa model wayefisa. Iningi amadivayisi isicelo sokwenyusa amanani ingxenye libhekene ukusebenza high, ukucacisa ukuphatha isikhathi eside ukujabulisa abanikazi bayo. Kuyadingeka ukuba achazwe kusengaphambili nge umthamo elilinganisiwe umsebenzi futhi acabangele nemingcele ezilandelayo:
usayizi kuphela. Icubungula kanzima evele lula ngokusebenzisa ithuluzi nge yedwa encane kokuba simise esingunxantathu. Kulesi grinder isixwayisi nge zokusebenza ebusweni mkhulu ngokufanele uyakufanelekela ukuba evele ngobuningi futhi ukusetshenziswa kakhulu.
Imvamisa oscillation. Njengoba kwanda amplitude ngcono ukucutshungulwa ukunemba zokukhiqiza iyakhula.
Amandla. grinder vibratory angase abe namandla Watts 150 kuya kwangu-600. Inani isilinganiso kuyoba okwanele imisebenzi ejwayelekile. Amathuluzi ngamandla okusezingeni eliphezulu ayesinda futhi kunzima ukusebenzisa.
Naphezu kweqiniso lokuthi Sander isixwayisi Makita ibekwe njengoba ithuluzi ukucubungula yenqwaba isikhala, kuba compact futhi kalula esifanelana entendeni. Ubukhulu we ipuleti kuwukwenza 102h112 mm. Ingasetshenziswa njengendlela esiku lokukhuhla futhi Sanding amashidi, ifakwe Velcro. Nenkanuko edlulele is olunikezwa izibopho ekhethekile etholakala nhlangothi zombili.
Umklamo inezingxenye ezimbili eziyinhloko: isibambo ergonomic, kulekelelwa i faka akhiwe ngerabha ukuvimbela izandla slippage futhi outsole ukusebenza. Engxenyeni engaphezulu kuphela yomzimba ibekwe inkinobho kufihlwe ngemuva ikhava abicah. Iziqobosho for the iphepha abe design izingubo ezivamile kodwa eziqinile.
Kuyaphawuleka khona bentambo iraba nge ukwahlukanisa double, okuyinto ejwayelekile intengo ephakeme imishini.
Dusting kungaba kwenziwe nge-adaptha nge-vacuum cleaner. In the ukungabikho kwakungenzeka lokhu ungasebenzisa isikhwama uthuli, enikeziwe.
Ithuluzi Bosch GWS 20-230 H: Incazelo
Sander Bosch kunezinzuzo eziningi phezu imishini efanayo. Ngokwesibonelo, i-nenkanuko edlulele sandpaper esetshenziswa ngokwezifiso inketho okunamathiselwe. Amadivayisi ifakwe brand eziningi samabhingo noma amadivayisi zifana ne ukudla. Abenzi kuphela zilinyazwa kalula, kodwa futhi zidinga ukunakekelwa njalo, njengoba engalingani iphepha ukungezwani kuzoholela umonakalo kule nqubo.
Leli thuluzi lisebenzisa uhlelo okuthiwa SheetLoc. Design Its kuhlanganisa izingalo ezimbili ezinika aminyene iphepha nenkanuko edlulele nhlangothi zombili, ke Akudingi umzamo. Nje cindezela isigwedlo bese ubeka olwalwenza ngaphansi latches. Omunye wabo kulekelelwa nge isiphethu futhi ivumela ukudonsa iqonde iphepha futhi Friend.
ikhebula sensimbi sine kobude 4 m. isisindo luphakathi 4 kg. lokukhuhla Isetshenziswa kufanele ibe usayizi 25h11 cm.
grinders Vibratory ifakwe Bosch ukugaya apertured futhi okuqhubekayo ingaphakathi, i-adaptha ukuze yokuxhuma vacuum cleaner kanye esitsheni uthuli, okuyinto kulekelelwa umsebenzi microfilter.
Isisetshenziswa Operation Bosch GWS 20-230 H
Idivayisi kuyahluka ugqoko ngokwanele ezinkulu ngenxa ukucutshungulwa mayelana 22 cm, kanjalo kuba nokwenzeka ukuze bathuthukise ngomuthi indawo enkulu ngomzamo kancane futhi isikhathi izindleko futhi siba kakhulu kulula ukusebenza emaphethelweni. Uma kunesidingo, ukuphathwa sokugcina ifenisha mbumbulu kanye nomnyango panel, leli thuluzi kuyoba ikhambi best. Ukuze isebenze, kwanele ukuxhuma idivayisi kunethiwekhi bese ukulungisa kwesigamu ishidi sandpaper. Uthuli iqoqo kungaba kwenziwe ngezindlela ezimbili: ngokusebenzisa iziqukathi nge microfilter noma indinganiso cleaner wezindlu, esetshenziswa ukuxhuma adaptha futhi enikeziwe. Gilazi has a isici iphepha isihlungi okuyinto bakha ingxenye enkulu yabamemezeli izinhlayiya ezincane kunazo, uthuli ukususwa usebenzisa ukuvulwa okhethekile ngesivalo.
I processing kuqondile, Sander isebenze Bosch GWS 20-230 H inhlamvu ekhethekile, ngemva kwalokho ingalungiswa. Kwesokunene sakhe iyona Regulator of ijubane. Phakathi mshini yokusebenza izindlu zedivayisi ibekwe pads ekhethekile ukunciphisa vibration, ngakho ngokuhamba ukuyicubungula cishe hhayi wazizwa.
Sander "Interskol" ihlukile kwamanye amadivaysi ngesimo imishini asebenzayo esakhelwe uthuli ukususwa uhlelo. Injini ine impeller ezengeziwe, enikeza ukugeleza komoya ngokusebenzisa ukuvuleka, okuyinto kamuva ithunyelwa ipayipi legatsha. Kubo bonke uthuli kule esitsheni uthuli kwakudingekile ukuze unamathisele element ukuhlunga umlomo wombhobho futhi umphelelisi izimbobo ishidi olwalwenza kokuba ukuvuleka okuphambene indawo yesikhulumi. Phakathi ukusetshenziswa ende ukhetho best kuyoba ukuxhuma idivayisi vacuum cleaner usebenzisa i-adaptha.
inkinobho Electronic ivumela ukulungiswa of imvamisa oscillation. Sander "Interskol LBM-125" libhekisela esigabeni amathuluzi jikelele, ofanele ngomsebenzi ezahlukene, kodwa endaweni professional, it is ngokuvamile okusetshenziselwa ukwenza imisebenzi yokuqedela.
Sander "Interskol": Izici
Imishini ungukukhanya operation: ukugaya isici okungenzeka phi sekelo eqondiswa ematheni esebenzisa izibopho ezimbili, ngemva kwalokho kwamanzi aphathwe is eshelelayo ngokucophelela. Kuyaphawuleka ukuthi ngokuhamba umsebenzi badinga ukuhambisa ithuluzi yonkana indiza workpiece, ngaphandle ezikhandla ingcindezi ngokweqile phezu kwakhe futhi akazange ayeke endaweni eyodwa. Izinga isilinganiso ithuluzi umkhiqizo ikuvumela ukuba kuzuzwe imiphumela elikhulu. Ngakho-ke kuyehluka kahle iphinde ivimbele odla isikhala zokusebenza Yiqiniso, kuncike ngendlela efanele. Vibration Sander has a isisindo elincane 2.4 kg, futhi Uhlonze lwalo ungaphakathi uhla Watts 300.
Indlela uzigcine ezandleni: izincomo ewusizo. Kanjani ukuzibamba?